SARCOIDOSIS र LIVER
लिभरको सरकोडोसिस सर्रिसिडोसिस (70% सम्म) सँगै धेरै रोगहरु लाई असर गर्छ। तथापि यीमध्ये धेरै जना रोगहरूले जिगरमा लक्षणहरू कहिलेकाहीँ देखाउँदैनन् वा कहिल्यै देखाउँदैनन्। तिनीहरू अस्वाटमेटिक बिरामीको रूपमा चिनिन्छन्। तल लिभर sarcoidosis को बारेमा थप पत्ता लगाउनुहोस्।
यो पृष्ठमा जानकारी सरकोडोसिस विशेषज्ञको सहयोगको साथ संकलित गरिएको छ Dr Deepak Joshi, परामर्शदाता हेपेटोलोजिस्ट, किंग्स कलेज अस्पताल, लन्डन।
सार्कोडोसिसको साथमा नयाँ रोगहरू उनीहरूको जीपी वा परामर्शदातालाई लिभर सरकोडोसिसको कुनै पनि चिन्हको जाँच गर्न सोध्छन्।
यो पुस्तिकामा सरकोडोसिस र लीभरको बारेमा थप जानकारीहरू लक्षणहरू, निदान, उपचार विकल्पहरू र दृष्टिकोण सहित समावेश गर्दछ। त्यहाँ अवस्थाको केही दुर्लभ अभिव्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी पनि छ।
लेफलेट डाउनलोड गर्नुहोस्:
Sarcoidosis र लिभर:
लिवर सर्कोडोसिस द्वारा प्रभावित रोगहरु को लगभग 20% मा लक्षण हुन्छ। यी लक्षणहरू समावेश छन्:
Hepatomegaly (जिगर को बढावा, रोगियों को 20% सम्म उपस्थित)
जन्डिस (पहेंलो छाला, 5% भन्दा कम रोगीहरूमा उपस्थित)
हेपेट फंक्शन परीक्षण। यसले उच्च सीरम एल्किन फास्फेट (ALP) र गामा ग्लूटेमिल ट्रांसप्पिसेड (जीजीटी) देखाउँछ।
लिभर बायोप्सी। यसले लिभरमा granulomas को उपस्थिति पुष्टि गर्नेछ।
सीटी स्क्यान। यसले जिगरमा कुनै पनि granulomas (सूजनको सानो क्षेत्रहरू) देखाउँछ र सिरसोस (सानो, नोडुलर लिभर) को संकेतहरू पनि देखाउन सक्छ।
केहि दुर्लभ र पुरानो अवस्थामा, लिभर sarcoidosis अन्य स्थितियों को रूप मा प्रकट गर्न सक्छन्। यसमा समावेश छ:
पोर्टल उच्च रक्तचाप
1. पुरानो चोलोस्टेसिस
उन्नत हेपेट sarcoidosis संग रोगहरु एक पुरानो कोलोराडो सिंड्रोम विकसित हुन सक्छ। यो जहाँ पित्त जिगर बाट आंतमा प्रवाह गर्न सक्दैन।
Pruritus (खुट्टा छाला)
निदान: सामरिक पैटर्न को असामान्य लीभर फंक्शन परीक्षण।
उपचार: त्यहाँ सीमित उपचार विकल्पहरू छन्। 30 देखि 40 मिलीग्रामको खुट्टा / खुट्टामा कोर्सेनिकोस्टरोड्सको दिन लक्षण, कम सीरम ए एल पी र जीजीटी स्तरमा सुधार ल्याउन र हेटेरोमेगल सुधार गर्न सक्छ। Ursodeoxycholic एसिड हुन सक्छ जिगर फंक्शन परीक्षण।
2. पोर्टल उच्च रक्तचाप
पोर्टल हाइपरटेन्सन लिभर वरिपरि रिगहरूमा रक्तचापमा वृद्धि हुन्छ। यो अवस्था अक्सर बिलीय फाइब्र्रोसिस वा सिरोसिसको परिणामस्वरूप हेपेट सरकोडोसिसको साथ विकास गर्दछ। उन्नत रोगीहरूमा यो सम्भव छ।
Ascites (पेट मा द्रव)
गोस्स्ट्रो-आंतन (जीआई) पथमा घटेको रक्त वाहिकाहरू (varices) बाट ब्लेडिंग
निदान: पेट अल्ट्रासाउन्ड र माथिल्लो जीआई एन्डोस्कोपी।
उपचार: Diuretics ascites को लागि दिइएको हुन सक्छ। Betablockers पोर्टल venous प्रणाली मा दबाव को कम गर्न मा मदद गर्न सक्छन्। रक्तचाप varices को लागि, चिकित्सकीय endoscopy आवश्यक छ।
सर्क्रॉसिस जिगरको उन्नत scarring (फाइब्रोसिस) हो जुन सामान्यतया स्थायी छ। यो लिभर sarcoidosis को मामलाहरु को 1% भन्दा कम मा हुन्छ।
ब्लेडिंग र सजिलै संग बोझ गर्दै
भ्रम (हेपेट एनेफोलियोपैथी)
उपचार: Standard treatment of cirrhosis and its complications. Please refer to the British Liver Trust. Patients with cirrhosis should be enrolled inasurveillance programme for hepatocellular carcinoma.
उपचार र आउटलुक
जिगर sarcoidosis संग धेरै रोगहरु रोग को एक हल्का रूप छ र उपचार को आवश्यकता छैन। 75% रोगीहरू सम्म कोर्गीसिस्टोइड्स बिना सुधार देखाउँछन् र बाँकी रहेका स्थिर रहन्छन्।
तथापि उन्नत अवस्थामा रहेकाहरूको लागि कोर्टोस्स्टेरियोड्ससँग उपचार हुन सक्छ। यसले जिगर प्रकार्य परीक्षणलाई सुधार गर्न सक्छ र लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ। कोर्टोस्टेस्टोइड्सको इष्टतम अवधि अस्पष्ट छ। सिरोहोसिसका सबै रोगीहरूलाई लिभर विशेषज्ञ वा गेस्रोटरनेलोजिस्टमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ।
लिभर प्रत्यारोपण निदान को लागी रोगी को लागी एक वैध विकल्प हो (उदाहरणार्थ इत्राइट्स, हेपेटियोसेलुलर कार्कोनोमा (एचसीसी) को विकास, variceal रक्तचाप।